Arsenal oo lagu eedeeyey afduubka mid ka mid ah ciyaartoyda ay ku dhaarato. – SBC
Arsenal oo lagu eedeeyey afduubka mid ka mid ah ciyaartoyda ay ku dhaarato.
Kooxda Arsenal oo ka dhisan waqooyiga magaalada London ayaa lagu eedeeyey inay afduub u haysato 24 jirka Francesc “Cesc” Fàbregas i Soler oo ah kaptanka kooxdaasi oo xiligan hilow u qaba in uu dib ugu laabto hoygii uu ku dhashay ee gobolka Catalonia ee wadanka Spain, gaar ahaan in uu ka ciyaaro garoonka Nou Cam ee kooxda Barcelona.
Estanislau Fors oo ah duqa tuulada Arenys de Mar oo ah halkii uu ku dhashay kuna soo barbaaray ciyaaryahan Fabregas ayaa ku eedeeyey kooxda Arsenal gaar ahaan Tababare Arsene Wenger in uu afduub u haysto Cesc.
“Dhamaanteen waxaynu doonaynaa Cesc in uu dib ugu soo laabto Barcelona, waayo xiligan wuxuu ku nool yahay afduub, hadii ay dhab tahay in Arsenal ay yihiin akhyaar Ingiriis ah ma aheyn, in ay sidaasi u dhaqmaan, waa inay joojiyaan kaftanka & riwaayada waana wax cid waliba niyad jabinaya” ayuu yiri Mayor-ka tuulada Arenys de Mar oo ah magaalo dhacda xeebaha Spain oo ay ku nool yihiin dad aan ka badneyn 15 kun oo qof.
Arsenal ayaa la sheegay inay diidey aduun lacageed oo gaaraya 50 milyan oo doolar oo ciyaaryahanka khadka dhexe ay ku doonayso kooxda Barcelona oo ah halkii uu kaga soo biiray Arsenal 2003-dii isagoo 16 sano jir ah.